Apple Tarisa Yakamira Kugadzirira Kugadziridza? Heino Kugadzirisa! - Apple Tarisa
iphone kufa nebhatiri rasara
iphone 11 hapana sim kadhi
hafu iphone skrini isiri kushanda
iphone inoramba ichitangazve yega
Apple Tarisa Yakamira Kuongorora Kwazvino? Heino Kugadzirisa!
Uri kuedza kugadzirisa yako Apple Watch, asi haisi kushanda. Zvisinei nezvaunoita, iyo yekuvandudza haizopedzise kuongorora. Muchikamu chino, ini ndichatsanangura zvekuita kana yako Apple Watch yakanamatira kuongorora iyo yekuvandudza !
Ipa Iwo Iwo Mashoma Mamwe Maminetsi
Ndakawana zano rechinyorwa ichi mushure mekuyedza kugadzirisa yangu yeApple Watch. Maitiro acho ainonoka uye ini ndakamhanyira mune vaviri hiccups munzira.
Kutanga, ingorega yako Apple Watch igare kwemaminetsi mashoma, kunyangwe ichitaridzika kunge yakanamatira Kuongorora . Zvakatora yangu Apple Watch maminetsi mashoma kuti apedze kuongorora kwayo kugadzirisa.
Chechipiri, ita shuwa kuti yako Apple Watch ine 50% yehupenyu hwebhatiri uye yakabatana nechaja yayo. Zvikasadaro, iwe haizokwanise kuigadziridza . Kana iwe uchiri kunetseka nekuvandudza yako Apple Watch, tevera matanho ari pazasi!
Tarisa maSeva eApple
Yako iPhone inofanirwa kubatana Apple's maseva kurodha yazvino watchOS kugadzirisa. Dzimwe nguva, iwo maseva anowira uye anokudzivirira iwe kuti usadaro. Shanyira webhusaiti yeApple uye uve nechokwadi chekuti maseva avo ari kushanda nemazvo. Iwe uchaziva maSeva eApple ari muchimiro chakanaka kana paine dhi girini padhuze neese system kana sevhisi.
Vhara Iyo Yekutarisa App
Nguva nenguva, iyo Watch app inopunzika iwe uchiyedza kurodha pasi, kugadzirira, kana kusimbisa yazvino watchOS yekuvandudza. Dzimwe nguva, kuvhara iyo Watch app kunogona kugadzirisa dambudziko.
Kutanga, iwe uchafanirwa kuvhura iyo switch switchch pane yako iPhone. Pane iPhone 8 kana kupfuura, pinda-pinda bhatani repamba. Pane iPhone X kana nyowani, swipe kumusoro kubva pasi kusvika pakati pekona.
Kamwe iyo switcher yeapp painovhurwa, Rova rova ​​iyo Watch app kumusoro uye kudzima pamusoro pechiso.
Vhara Iwo Mamwe Mapurogiramu Pane Yako iPhone
Mushure mekuvhara iyo Watch app pane yako iPhone, edza kuvhara ako mamwe maapplication futi. Zvinogoneka kuti imwe app yakadonha, ichikusiya neApple Watch iyo yakanamatira ichiongorora kugadzirisa.
mienzaniso yekukoka tsamba yevisa
Vhura switcher yeapp zvakare uye swipe ese maapplication kumusoro uye kubvisa pamusoro pechiso.
sei alarm yangu isiri kushanda pa iphone
Zvirongwa hazvisi izvo chete zvinogona kuita kuti software iparare pa iPhone yako. Kutangazve yako iPhone kunogona kugadzirisa mamwe madiki madhiragi esoftware.
Dhinda uye ubatisise bhatani remagetsi kusvika slide kumagetsi kudzima kunoonekwa . Kana iwe uine iPhone X kana nyowani, panguva imwe chete pinda uye ubatise chero vhoriyamu bhatani uye bhatani rerutivi.
Tangazve Yako Apple Kutarisa
Paunenge uchitangazve yako iPhone, tangazve yako Apple Watch futi. Izvi zvinogona kugadzirisa diki software nyaya neako Apple Watch.
Dhinda uye ubatisise bhatani repadivi kusvikira Simba Radzima raoneka. Wadaro, swipe iyo simba icon kubva kuruboshwe-kuenda-kurudyi pane iyo kuratidzwa.
Tarisa uone An iPhone Kugadziridza
Dzimwe nguva unofanirwa kugadzirisa yako iPhone usati wagadzirisa yako Apple Watch neiyo yazvino vhezheni yewatchOS. Vhura Zvirongwa uye tapira General -> Software Kwidziridza . Kana inogadziridza iripo, pombi Dhawunirodha uye Isa .
Kana uchinge wagadzirisa yako iPhone, vhura iyo Watch app uye edza kumutsiridza yako Apple Watch zvakare.
Zvimwe Zvakawanda Zvekugadzirisa Matanho Matanho
Nhanho yekupedzisira yaunotora kana yako Apple Watch yakanamatira kuongorora iyo yekugadzirisa ndeyekusagadzikana yako Apple Watch uye nekuimisa seyatsva. Iwe unogona kuita izvi nekusaisa pairi pane yako iPhone kana nekudzima zvese zvirimo uye marongero pane yako Apple Watch.
Paunopedza rimwe rematanho aya, zvinoita sekunge uri kutora yako Apple Watch kunze kwebhokisi kekutanga nguva. Sezvo uine yako iPhone iri nyore, isu tinokurudzira zvikuru kusagadzirisa yako Apple Watch uchishandisa yako iPhone.
Unpair Yako Apple Tarisa
Paunenge uchiita nhanho dziri pazasi, chengeta yako iPhone neApple Tarisa munzvimbo dzepedyo dzeumwe neumwe kuti uone kuti maitiro acho anofamba mushe.
Vhura iyo Watch app pane yako iPhone uye tora pane yako Apple Watch kumusoro kwechiso. Tinya Ruzivo bhatani (iyo ini mukati medenderedzwa), wobva wadzvanya Unpair Apple Watch.
kukurudzira minamato yevarwere vegomarara
Kana yako Apple Watch ichibvumidzwa neCellular, ita shuwa kuti unosarudza kuchengeta hurongwa hwako. Tinya Unpair Apple Kutarisa zvakare kusimbisa yako sarudzo.
Bvisa Zvese Zvemukati Uye Zvirongwa
Vhura Zvirongwa pane yako Apple Watch uye tap General -> Seta -> Bvisa Zvese Zvemukati uye Zvirongwa .
Ita shuwa kuti iwe unosarudza kuchengeta hurongwa hwako kana yako Apple Watch inogoneswa neCellular. Wobva wadzvanya Bvisa zvese . Yako Apple Watch ichavhara pasi, itangezve, uye yotangazve.
Kana yako Apple Watch ichiri kunamira ichisimbisa iyo yekuvandudza, ingangoita nguva yekushanyira iyo Apple Chitoro. Tinokurudzira kugadzira musangano kutanga kuti usapedze zuva rako wakamira wakamirira kuti mumwe munhu avepo.
Iwe wagadzirisa dambudziko neako Apple Watch uye ikozvino zvave zvechizvino zvino. Inotevera nguva yako Apple Watch painomira ichiongorora, iwe unozoziva kugadzirisa dambudziko racho. Une chero mumwe mubvunzo nezve yako Apple Watch? Vasiye pazasi!